एक जोडि जंगल मा एस्तो कार्या गर्दा गर्दै पक्राउ ! भिडियो भयो भाईरल,,, कृपया हेर्न नछुटाउनु होल (भिडियो सहित) – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनएक जोडि जंगल मा एस्तो कार्या गर्दा गर्दै पक्राउ ! भिडियो भयो भाईरल,,, कृपया हेर्न नछुटाउनु होल (भिडियो सहित)
December 2, 2020 admin मनोरंजन 8607
शिक्षाको दायरा यो इक्कीसौं शताब्दीका पुस्तकहरूमा मात्र सीमित छैन। धेरै परिवर्तन गरीएको छ र सिकाई प्रक्रिया सजिलो बनाएर अन्वेषण गरिएको छ। इन्टरनेट को जादू वास्तव मा संसार परिवर्तन भएको छ, साथ यो अनलाइन साइटहरु र वेब पृष्ठहरु को प्रभाव आउँछ। राम्रो ब्लग र साइटहरू दोस्रो पुस्तक हो जहाँबाट हामी बढि जान्छौं, हामी त्यो चीज जान्छौं, जुन हामीले अहिले सम्म सिकेका छैनौं वा सुनेका छैनौं।
अन्य राम्रो साइटहरू जस्तै, ओन्नेप। चाखलाग्दो, नयाँ र अनुपम लेखहरू प्रकाशित गर्दछ। हामी पनि अद्वितीय भिडियो समाचार, डिजिटल मार्केटिंग मा आधारित लेख, खेलकुद समाचार र अधिक धेरै प्रकाशित। हाम्रो मुख्य अभिप्राय दर्शकहरूलाई नयाँ र अनुपम सामग्री साझा गर्नु हो। मुख्य रूपमा Onnep ले टेक, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लगिंग र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपयोगी लेखहरू साझा गर्नु हो।सामान्य जस्तो आज हामी यहाँबाट छोटो फिल्म प्रस्तुत गर्दैछौं यो चलचित्रले हाम्रो समाजमा के भइरहेको छ देखाउँदछ। चलचित्रले गाउँका युवाहरूले कसरी प्रेमलाई आउटडोर बनाउन प्रयास गर्दछ देखाउँदछ।
November 1, 2020 admin मनोरंजन 7109
बिभिन्न बैज्ञानिक अध्ययनले मात्र होइन, विष्णु पुराणमा विभिन्न शास्त्रीय महत्व र मानिसले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा बताइएको छ । विष्णु पुराणमा भूगोल, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, राजवंश र भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ । -निरोगी
April 29, 2021 admin मनोरंजन 4272
April 10, 2021 admin मनोरंजन 3614
दाङमा एउटा अनौठो घ ट ना भएको छ । एक जना २७ वर्षका युवकको सम्पर्क राख्दै गर्दा गोप्य अंङ भाँ’चि’एपछि सफल श ल्यकृया गरिएको छ । मध्यरातमा श्रीमतीसंग स म्पर्क राखेका पुरुषलाई यस्तो घ ट